Bus Conditioner maka Double Decker Bus ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | ABG
Ngwaahịa mejupụtara Compressor, condenser, nza nzacha, valvụ mgbasa, evaporator, pipeline na eletriki.
E kewara ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ akara dị ka ụdị dị iche iche na ogo nke nkeji kwekọrọ. Dabere na ihe owuwu ahụ, a na-ekekarị ha n'ime ụdị njikọ na ụdị nkewa.
N'ịza oku nke obodo a site na 2014 ruo ugbu a, China emeela ihe ọhụụ ọzọ na igwe ikuku ikuku na nke mbụ, tinye teknụzụ eletriki ikuku eletrik karịa nke ọma na igwe ikuku anyị, na mepụtara ụdị dị iche iche dị iche iche Ngwaahịa iji gboo mkpa ahịa.
Usoro SZB, maka bọs deki okpukpu abụọ nke 10-12
Nkọwapụta teknụzụ nke Double Decker Bus A / C SZB Series:
Ogologo Bus na-atụ aro
970 nkp / r
Compressor Weight (na-enweghị ipigide)
Modeldị Mgbasawanye Mgbasa Ozi
Unlọ Unit Dimension
Flọ Unit arọ
1. Igwe refrjiraeto bụ R134a.
2. Igwe ikuku ikuku na-arụ ọrụ n'ozuzu karịa igwe azụ, a ga-atụle ya maka ntinye ka a gbanye ya n'ozuzu ya, ma wepụta ya maka imegharị. Ejiri eriri ikuku nke njikọ mgbanwe n'etiti otu na ikuku ikuku n'ime ụgbọ ala ahụ.
3. A ga-enwerịrị mmụba na ikuku ikuku na-asọda na-abanye ma na-ekpochapu ikuku na-enweghị nsogbu, yana na ikuku na ikuku na-apụ n'ụzọ dị irè na-enweghị ifufe na obere sekit. Ikuku ikuku nke ugbo ala gha aghaghi ibu≤5m / s.
4. airgbọ ikuku nke njikọ mgbanwe site na ntụ oyi ikuku na ikuku ụgbọ ala nwere ụdị pụrụ iche, yabụ imewe kwesịrị ịtụle arụmọrụ nke ntinye ma belata nguzogide nke ikuku ikuku. Ifufe ikuku nke uzo ngaji aghaghi ibu≤12m / s.
5. Uzo ikuku nke ikuku ikuku nke mbu na bọs aghaghi ibu ≤8m / s.
6. Ọ kachasị mma ịtọlite ​​grille nloghachi ikuku iche iche dabere nha ikuku ikuku nke elu na ala ala. Ma ọ bụ enwere ike ịtọ ya iche iche maka ụlọ elu, na ala ala na-alaghachi ikuku site na steepụ.
7. Biko kpọtụrụ anyị na sales@shsongz.cn maka nhọrọ ndị ọzọ na nkọwa.
Nkọwapụta Nzuzo zuru ezu nke SZB Series Bus Air Conditioner
1. ịmụta elu condenser condensed mmiri okpomọkụ mgbake technology iji belata elu nsogbu nke friji usoro ma melite ike arụmọrụ ruru nke ngwaahịa.
2. Mkpokọta etiti Ọdịdị dị obere na nha nha.
3. Emebere ahaziri, imewe modulu, ịzaghachi ngwa ahịa maka mkpa ndị ahịa.
4. E nwere ọtụtụ ụdị ngwaahịa, nke nwere ike ikpuchi 10-12 mita okpukpu abụọ na otu ụgbọ mmiri na ọkara.
5. The evaporative ikuku olu nwere ike gbanwee dị ka ojiji chọrọ iji hụ edo ikuku mmepụta.
Ọnọdụ Ngwa nke Double Decker Bus Air Conditioner SZB Series:
Nke gara aga: Ọnọdụ ikuku nke ụgbọ ala maka ụgbọ ala, nchịkwa, buslọ akwụkwọ na ụgbọ ala echekwara
Osote: Air ọcha na Disinfection System
Ntụ oyi maka Bus
ntụ oyi maka minibus
azu-ndokwasa ikuku conditioner
Bus Air conditioner Maka Ugboro abụọ Decker Bus
Ugboro abụọ Decker Bus A / C
Ugboro abụọ Decker Bus Air Conditioner
Ntụ oyi maka Bus, Coach, ụlọ akwụkwọ Bus na ...